Man United oo la filayo todobaadkan inay iibsadaan qoyska boqortooyada Qadar – SBC
Man United oo la filayo todobaadkan inay iibsadaan qoyska boqortooyada Qadar
Kooxda kubada cagta Manchester United ee haysata horyaalka Premier League-ga dalka Ingriiska ayaa la sheegay in ay dhawaan la wareegi doonaan qoyska Boqortooyada Qadar.
Taageerayaasha Man United oo mucaaradsan qoyska Glazer
Wargeyska The Daily Mirror ee ka soo baxa magaalada London ayaa saaka daabacay warbixin uu ku sheegayo in ilo wareed oo uu ka helay Bariga dhexe ay muujinayaan in boqortooyada Qadar ay todobaadka soo socda la wareegi doonto mulkiyada kooxda Manchester United.
Mulkiilayaasha Man United qoyska reer Glazer waxay sheegeen inaanay talada ugu jirin inay iibiyaan kooxda waxaase la sheegay inay adag tahay inay markan diidaan aduunka lacageed ee la sheegay in Qoyska boqortooyada Qadar ay ku doodayaan inay ku gataan kooxdaasi kaasi oo la sheegay in uu laba jibaar ku yahay dhaqaalihii ay ku gateen ee ahaa 1.3 bilyan oo doolar waxaana wararku sheegayaan in haatan qoyska reer Qadar ay diyaar u yihiin inay bixiyaan 1.6 bilyan, inkastoo Glazer Family ay doonayaan 2 bilyan.
Qoyska Ameerikaanka ah ee Glazer ayaa sanadkii 2005-tii iibsadey Man United laakiin taageerayaasha kooxda ayaa si weyn uga biyo diidsan lahaansha kooxda ee qoyskaasi ka markii deynta kooxda lagu leeyahay ay cagaha galisey 850 milyan oo doolar.
Hadii qoyska boqortooyada Qadar ay iibsadaan Manchester United waxaa la sheegayaa in ay heli doono dhaqaale balaaran oo maalgalin ah oo la mid ah midka ay haatan ku xawaareynayso kooxda ay dariska yihiin ee xifaaltanka ba’ani ka dhaxeeyo ee Man City, taasi oo la wareegeen qoyska boqortooyada Abu Dubai.
Wargeyska Daily Mirror wuxuu sheegay in wafdi ka socda qoyska boqortooyada Qadar oo uu hogaaminayo Amiirka Qadar Sheikh Hama bin Khalifa Al Thani uu maalinimada Isniinta imaan doono magaalada Manchester iyadoo la filayo in taasi ay tahay sidii heshiiska loo soo afjari lahaa.
Hadii ay dhacdo la wareegida Man United qoyska boqortooyada Qadar waxay taasi ka dhigaysaa kooxdii sadexaad oo ka mid ah Premier League-ga oo ay la wareegeen ganacsato Carbeed iyadoo Manchester United & Fulham ay leeyihiin Ganacsato u dhalatey wadamada Imaaraadka Carabta & Masar.
Sidoo kale ganacsato Carbeed ayaa iibsadey kooxo ka dhisan wadamada Jarmalka & Spain kooxahaasi oo helay maalgalin xoogan kana ciyaara horyaalada wadamadaasi.
wey fiicantahay in man ay iibsato boqortooyada qadar waxeyna faiido uu noqonaysa dhamaan ciyaaryahanada ku suugan wadankasi